एक पिल्ला हुर्काउने: आफ्नो नयाँ घरमा पहिलो हप्ता - कुकुरहरु
एक पिल्ला हुर्काउने: आफ्नो नयाँ घरमा पहिलो हप्ता
ब्रुनो बक्सर पिल्लाको साथ जीवनमा एक दिन। ब्रुनोको पहिलो हप्ता — weeks हप्ता पुरानो, १२ पाउन्ड, १० इन्च जग्गाबाट काँधको सबैभन्दा माथिल्लो बिन्दुमा (सुक्खा)।
१ र १/२ महिना भन्दा थोरै
हामी अपनाईयो ब्रुनो जब उनी weeks हप्ताको थिए। हामीले उनलाई उठाउनु र उसलाई घरमा ल्याउनु अघि उ ब्रीडर छोड्न तयार नभएसम्म हामीले कुर्नुपर्‍यो। ब्रीडरको नीति the हप्ताको नभएसम्म पपुलाई छोड्नु थिएन, यद्यपि ब्रुनोकी आमाको मृत्यु भइसकेको थियो र उनी उनीसँग त्यो अतिरिक्त हप्ता पाउने थिएनन र हाम्रो अन्त तालिकामा द्वन्द्वका कारण उनले अपवाद गरे। । पर्खाइ गाह्रो थियो - हामी सबै धेरै उत्साहित थियौं — यद्यपि म पनि राम्रो रातको निद्राका दिनहरू गन्न थालें।
हामीले गर्ने निर्णय गर्यौं क्रेट हाम्रो नयाँ पिल्ला ट्रेन । प्रारम्भिक दिनहरूमा प्रायजसो कुकुरहरू रुन बनाउँदछन् किनभने तिनीहरूले आफ्नी आमा र उनीहरूको सहयोगीलाई हराउँछन्। मैले रुनको भाँडामा ब्रुनोको क्रेट राखें किनकि यसको एउटा फ्लोर छ जुन कुनै दुर्घटनामा सजिलैसँग सफा गर्न सकिन्छ। रातभरि रुँदै गरेको कुकुरको आवाजलाई तर्सदै, र यो रातको कुकुरबाट पहिलो रात हो भनेर थाहा पाउँदा मैले मेरा दुई बच्चाहरूलाई क्रेटको छेउमा भान्छाको भुइँमा शिविर स्थापना गर्न भनें। म उसको ओछ्यानमा पिल्ला ल्याउन चाहन्न किनकि हामी उसको उमेरमा ओछ्यानमा बस्न अनुमति दिँदैनौं। यो काम गर्‍यो, ब्रुनो आफ्नो क्रेटमा सुतिरहेका थिए र रातभर हिपेन किनभने उहाँ एक्लो हुनुहुन्नथ्यो। एली, हाम्रो वयस्क बक्सर र हाम्रा दुई बच्चाहरु उसको टोकरीको छेउमा थिए। यसले ब्रुनोलाई क्रेट के हो भनेर जान्न अनुमति दियो, तर एक्लै छोडिनेछैन। ब्रुनो आफ्नो तीन घण्टा कार सवारी घर र उसले पाइरहेको सबै ध्यानबाट थकित थियो। अचम्मको कुरा, ऊ बिहान :00:०० बजेसम्म निदायो, जुन समयमा उसले मलाई उसको अग्लो पीडाले जगायो। म ओछ्यानबाट बाहिर उफ्रिएँ र दगुर्दै उसलाई बाहिर लिन पुगें। यो बिहानको खाजाको लागि समय, अर्को यात्रा बाहिर र प्लेटाइम थियो।
Weeks हप्ता र १ दिन पुरानो
दोस्रो रात ब्रुनो बिहान :00:०० बजेसम्म सुतिरहेको थियो। म दिनको लागि उठेको थिएँ किनभने जब उनी ब्यूँझन्छन्, उनलाई दाँत बाहिर पुग्ने र पोपमा लैजान आवश्यक पर्दछ। त्यसपछि उहाँ भोकाउनु भएको थियो। उसले खाए पछि उनलाई फेरि बाथरुम जान फेरि बाहिर लैजानुपर्‍यो। कुकुरले खाए पछि, यो तिनीहरूलाई उत्तेजित गर्दछ र धेरै जसो धेरै समय, उनीहरूलाई हटाउनु पर्छ, यो एउटा कुकुर संगको औंठाको नियम हो। त्यसोभए ऊ खेल्न चाहन्छ। जे भए पनि ऊ उठ्यो! हाइपर प्राप्त गर्न खेल्नको लागि वर्तमान जस्तो समय छैन।
Weeks हप्ता र २ दिन पुरानो
हामी अत्यन्त कोशिस गर्दैछौं कि घरको भित्री भागमा रहेको ब्रुनोलाई बाथरूममा जान नदेऊ। उहाँसँग पछिल्ला दुई दिनमा तीन दुर्घटनाहरू भए, जुन एकदमै नयाँ पिल्लाको लागि राम्रो छ। यदि ब्रुनो आफ्नो क्रेटभन्दा बाहिर छ भने, ऊ निरन्तर हेरिन्छ। मेरो मतलब कोठाभरि हेरेको छैन, यसको मतलब उसले 'उसको वरिपरि हेराई गरेको' भनेको उसले घर भित्र नहेर्ने, पुप वा केही चाउने छैन भनेर पक्का गर्नका लागि हेर्यो। दिनको बखत हामी उहाँलाई क्रेट नगर्न प्रयास गर्दछौं। ऊ या त समातिएको छ, बाहिर वा बाहिर होल्ड गरिएको छ। हामी उसको लागि धेरै ठूलो घेरा भएको यार्ड पाउन भाग्यशाली छौं। यदि हामीले त्यसो गरेनौं, उनी बाथरूममा जान पट्टि जानु पर्छ, जुन धेरै समय खपत हुने थियो।
हामीले ब्रुनोलाई सिकाउनु पर्दछ कि हाम्रो हात र खुट्टा काट्नु हुँदैन। हो, यो अहिले राम्रो छ र किसिमको हास्यास्पद छ, तर जब ऊ -०-80० पाउन्ड हुन्छ यो यति प्यारा हुनेछैन। एक कुकुर संग औंठिको नियम: यदि तपाईं उसलाई हुर्कन चाहनुहुन्न जब उहाँ परिपक्व हुर्कनुहुन्छ, उहाँलाई जब यो एक पिल्ला छ गर्न नदिनुहोस्। यसमा फर्निचरमा उनीसँग बस्नु समावेश छ।
अर्को कुरा हामीले त्यसलाई काट्नुपर्दछ हाम्रो बिरालाहरूलाई पछ्याउनु। फेरि, यो अहिले प्यारा र हास्यास्पद छ, तर यो सानो सानो बक्सर कुकुरहरू लामो समयको लागि सानो हुने छैन र हाम्रा बिरालाहरूले वयस्क कुकुरले उनीहरूको वरिपरि खेदो गरेनन्। बिरालाहरू चलाख छन्, यदि हामीले यसलाई जान दियौं भने उनीहरूले कतै बसोबास गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्दछन्।
'होइन!' हामी अर्को वर्षमा त्यो केहि थोरै भन्दैछौं।
एली बक्सर आफ्नो नयाँ भाइलाई भेट्छन्। वयस्क कुकुरले सामान्यतया कुकुरलाई आक्रमण गर्दैनन् र एलीले साना केटालाई मन पराउँछन्। उनले उसलाई उनको ठाउँमा केही समय राख्नुपर्‍यो, जुन कुकुरको सामान्य व्यवहार हो। एक वयस्क कुकुर अक्सर एक कुकुरलाई मा यो को व्यवहार को लागी स्वीकार्य छैन थाहा दिन को लागी हुर्कन्छ। उदाहरण को लागी, जब ब्रुनो खेल्न चाहान्थ्यो र Allie ले गरेन, उनी सानो छाउनी बाहिर र पिल्ला मा stomped उहाँलाई पर्याप्त बताउन को लागी। ब्रुनोले स took्केत लिए र उसको खेलको समर्थन गरे र यसको सट्टामा एलीको कलर र कुकुर ट्यागमा चियाउन थाले। एलीलाई उनको ट्यागहरू चबाईएको जस्तो लाग्दैन। उनीले बुन्नोलाई महसुस गरी कि उनी बच्चा मात्र हुन्।
म भाग्यमानी छु कुकुर संग घर मा हुन। यदि मैले कामको लागि छोड्नुपर्थ्यो भने चीजहरू धेरै जटिल हुने थियो। ब्रुनो जवान छ र उसले केही समयको लागि मात्र आफ्नो पेशा र पप समात्न सक्छ। क्रेटलाई प्रशिक्षण दिनको कुरो यो हो कि तपाईंले कुकुरलाई सानो क्रेटमा राख्नुहुन्छ त्यसैले आराम गर्नको लागि सुत्ने ठाउँ मात्र छ। कुकुरहरू सुत्ने ठाउँलाई हटाउन मन पराउँदैनन्। जहाँसम्म, यदि तपाईंले जवान पिल्लालाई धेरै बेर क्रेटमा छोड्नुभयो भने, तिनीहरू शारीरिक रूपमा यसलाई समात्न सक्दैनन् र उनीहरू खाटमा पनि जान्छन्। यदि तपाइँ यसलाई हुन अनुमति दिनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको होमब्रेकिंगमा पछाडि जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईं दिनमा धेरै घण्टा जानुहुन्छ भने, कुकुरले शारीरिक रूपमा यसलाई समात्न सक्ने भन्दा लामो, कुकुरलाई त्यस्तै ठाउँमा लेख्नु राम्रो हुन्छ जहाँ भान्छा सफा गर्न सजिलो हुन्छ र कुनै-कुनै पेशा प्याडहरू तल राख्छ। । यो कुकुर वा कुकुरलाई लामो समयसम्म क्रेट गर्नु उचित हुँदैन तब तिनीहरू आरामसँग आफ्नो फोहोरमा समात्न सक्छन्। यो धेरै गाह्रो छ हाउसब्रेक एक कुकुर तपाईं घर छैन भने। यसले वास्तवमै पिल्लालाई जीवनमा नराम्रो सुरुवात दिन सक्छ र जब उनीहरूले त्यसो गर्दैनन यसको आफ्नै गल्ती हुनेछैन हाउसब्रेकिंग को अवधारणा बुझ्नुहोस् । दिमागमा राख्नुहोस्, केहि तथ्यको लागि तपाई कुकुरलाई चिच्याउन सक्नुहुन्न, तपाईंले यो कार्यमा यसलाई समात्नुपर्दछ। यदि तपाइँले यसलाई कार्यमा समात्नुहुन्न भने, तपाइँको चिच्याई अर्थहीन र कुकुरका लागि भ्रामक छ।
अस्ट्रेलियाका गाईवस्तु कुकुरहरू कति ठूला छन्
म यो बिहान १::30० मा लेख्दै छु किनकि ब्रुनो आफ्नो टोकरीमा सुतिरहेको छ, किनकि दिनमा म वास्तवमै बस्न र ध्यान दिनको लागि उसलाई धेरै टेन्डिंग गर्न व्यस्त छु। जे होस्, ऊ उज्ज्वल र चाँडै हटाउन, खान र खेल्न चाहान्छ ...
ओह तर म केवल केहि निद्रा प्राप्त गर्न बन्द गर्दै थिएँ। यो अब बिहान २:०० छ र भान्छाको क्रेटबाट यिप्स सुरु भयो। ब्रुनो बाथरूममा जानु पर्ने थियो। म उनलाई बाहिर ठाउँमा हिंडे जहाँ म उनलाई उसको व्यवसाय गर्न रुचाउँछु। उसले हेर्यो र मैले उसलाई केहि समय दिएर हेर्ने निर्णय गरें कि यदि उसले पप गर्नु पर्थ्यो भने पनि ऊ बाहिर छ र म पनि जान्छु र मेरो कुकुरको प्याराको बन्डल जाँच गर्नै पर्छ ...
२:०5 बिहान ब्रुनो आफ्नो टोकरीमा फर्के।
२:०7 बिहान ब्रुनो यिप गर्दैछ। म सहजै उहाँलाई जान्छु। म उसलाई बाहिर निकाल्छु, उसलाई केहि कुकुर / आमा हग दिन्छु र हड्डीको साथमा उसको क्रेटमा फिर्ता राख्छु। शुभ रात्री, ब्रुनो, तपाईसँग मेरो सानो पिल्ला सिक्नको लागि धेरै छ। Sshhhh, मात्र आशा गर्दछ कि उसले मलाई रातभर राख्दैन किनभने मैले उसको रातको अर्थ के हो भनेर सिकाउनको निम्ति उहाँको यिपिंग राख्नु पर्छ। मैले टाइप गरे जस्तै उहाँ आफ्नो टोकरीबाट यिपिंग गर्दै हुनुहुन्छ। म नुहाउन र ओछ्यानमा जान छु। म ब्रुनोलाई एक पिउन दिने अनुमति दिन्छु र उसलाई अन्तिम पटक एलीसँग बाहिर राख्छु निस्किनु अघि म सुत्नु अघि ऊ जानु पर्दैन जब कि मैले उसको बिरालोलाई उसको क्रेटबाट बाहिर आउनु भनेर बिन्ती गर्दछु। यकीन छ कि उहाँसंग थियो कि 'म हिंड्नु पर्छ 'र उसले पोप गर्यो।
२::45aबिहान मैले नुहाउने पानी बन्द गर्दा ब्रुनो आँधीबेहरी चलेको सुनेंँ। यसले मेरो year बर्षको उमेरलाई जगायो जो लगभग निदाइरहेकी थिइन जब उनले उसको क्रेट खोलिन् उसलाई बाहिर पेशाबमा राख्न। मैले उनको पिल्लालाई बाहिर निकाल्ने पक्षमा गरें र उनलाई सुत्ने अनुमति दिएँ। मैले ब्रुनोलाई बाहिर राखें। उहाँ केहि मिनेट बाहिर बस्नुभयो र त्यसपछि फिर्ता चाहनुभयो। यो केवल आफ्नो तेस्रो रात उसको लिटरमेटहरूबाट टाढा छ र ऊ सानो पिल्ला हो। सामान्य कुकुरले मेरो घाँटी भरि चुम्बन गरे पछि (हो, मेरो नुहाउने पछि राम्रो, हु?) उसले मेरो अनुहारमा घुमाउरो र अहिले टाइप गर्दै छ। म उसलाई केहि मिनेट दिनेछु राम्रो र निद्रा प्राप्त गर्नका लागि उसलाई फेरि उसको बोक्रामा राख्नुहोस् र उत्तमको लागि आशा गर्दछु। यो सबै कामको साथ पनि, म उसलाई हेर्छु जस्तो मैले मेरा नवजात शिशुहरूलाई गरेको थिएँ मलाई मात्र यो सानो पिल्ला।
अर्को बिहान: Weeks हप्ता र days दिन पुरानो
:00:०० बिहान ब्रुनोको, भोकाएको र खेल्न तयार छ!
ज्याक रसल टेरियर चिहुआहुवा मिक्स पिल्ला
:40::40० बिहान ब्रुनो थाकेको छ र सुत्न फिर्ता जान तयार छ। तर पहिले, उनको टाउको पीसी जस्तै गन्ध आउँछ कि उसले यसमा पल्टेको हुनुपर्दछ। उहाँलाई सफा गर्ने समय र त्यसपछि उसलाई सुत्न फिर्ता गर्नुहोस्।
बिहान :30: .० ब्रुनो जागा रहेको उनको टोकरीबाट बाहिर निस्के। ऊ बाथरूम जान र खेलिन बाहिर लगिएको छ। उहाँ अब दिनको लागि जागा हुनुहुन्छ तर कुकुरहरूलाई धेरै निन्द्रा आवश्यक पर्ने हुनाले असंख्य झप्पी लिने छ। हामी उसको झोलाहरू केहि घण्टासम्म अन्त नहुने कोसिस गर्छौं, किनकि ती लामो निद्रा अवधिहरू मध्य रातमा समायोजित गरिनु पर्दछ।
यो आकारको टोकरी यो पिल्लाको लागि उत्तम आकार हो। त्यहाँ सुत्ने कोठा, तान्न र उभिनको लागि कोठा हुनु आवश्यक छ, तर उहाँलाई एक भागमा पेशाब गर्न पर्याप्त ठाउँ छैन र अझै सुत्ने ठाउँ पनि छ। यो ब्रुनोको हाम्रो साथ चौथो दिन हो र उसले यस अवधारणालाई स्वीकार गरिसकेका छ कि उसको क्रेट विचलित नभई निदाउनको लागि हो। यो दिनको बिच हो त्यसैले हामी थप शान्त भइरहेका छैनौं र ऊ आवाजका लागि बानी भइसकेको हुनुपर्छ। साथै उसको शान्त निद्रा को मध्य रात को लागी समायोजित गर्नु पर्छ। ऊ चाँडै नै उसको खाजा उठ्न, बाथरूममा जान र खेल्न जान्छ। ऊ केहि घण्टा ब्यूँझनेछ र अर्को झपकी चाहिन्छ।
यो क्रेट अहिलेको लागि उपयुक्त हुन सक्छ, तर चाँडै उसले यसलाई बढाउनेछ र हामीले उसलाई ठूलो बनाउनु पर्छ।
कुकुरहरूलाई निन्द्रा चाहिन्छ र दिउँसोको झोलाहरू एउटा कुकुरको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। मैले ब्रुनोलाई दुई घण्टा सुत्न दिएँ र यो निर्णय गरे कि उसलाई ब्यूँझाउने समय हो। जतिसक्दो चाँडो उसले आफ्नो घण्टा पल्ट्यो र रातमा सुतिरहेको छ म अब उनीहरुका दिनको पछाडि लम्बाइको बारेमा चिन्ता लिने छैन। मलाई थाहा छ ऊ रातमा निदाउन सक्छ उसले पहिलो दुई रात यो गर्यो, तर तेस्रो होइन।
ब्रुनोको th औं रात: we सप्ताह र day दिन पुरानो
ब्रुनो बिहान :30: .० उठे र उनको टोकरीबाट बाहिर आउन रोए। म तल झरे र उसलाई बाहिर राखें। उसले peed र pooped। मैले उसलाई फेरि उसको क्रेटमा लगेँ र यसलाई बन्द गरें। उसले ओछ्यानमा राख्यो, त्यसपछि केहि मिनेट पछि ऊ फेरि रुँदै थाल्यो। म भान्छामा फर्केर गएँ र उनलाई शान्त हुन र हड्डीलाई चबाउन मलाई बताउन लागेको थिएँ जब मेरो भित्रबाट केही मातृत्व वृत्तिले क्रेट ढोका खोले। ब्रुनो आफ्नो टोकरीबाट बाहिर निस्के र मेरो खुट्टामा त्यसपछि तल बसे, मेरो खुट्टामा झुकाई। मैले सानो साथीलाई उठाएँ, उसले मेरो टाउको मेरो काँधमा राख्यो र निदाउन थाल्यो। मेरो सामान्य सल्लाह कुकुरलाई पछाडि क्रेटमा हाल्नु हो यदि तपाईलाई यकिन छ कि उसले अब बाथरूममा जानु हुँदैन, तर म चट्टानको कुर्सीमा गएँ र उसलाई सुत्दै फिर्ता लियो। त्यसपछि मैले उसलाई आफ्नो क्रेटमा फिर्ता राखें र ऊ प्रक्रियामा फर्किए, तर यस पटक उनी सुत्न गए र बिहान :00:०० बजेसम्म निदाए। ऊ भर्खरै जन्मेको बच्चाजस्तै छ र ऊ जस्तो मिठो छ।
ब्रुनोको 5th औं रात: weeks हप्ता र days दिन पुरानो
ब्रुनो बिहान :30: .० उठ्यो र बाहिर जानको लागि आफ्नो क्रेटमा यिप गर्दै थिए। म तल आएँ र उसलाई बाहिर लगे र उनी बाथरूममा गए। ऊ थोरै शान्त नभएसम्म मैले उसलाई केही क्षणको लागि समातें, त्यसपछि उसलाई उसलाई फेरि उसको क्रेटमा राखियो र ऊ :45::45m बिहान फेरि निदायो।
:45::45। बिहान ब्रुनो फेरि उठे। ऊ नास्ता खेल्न र खानको लागि तयार थियो। मलाई पिटेको थियो, त्यसैले बिहान :00:०० बजे मैले उसलाई फेरि उसको सुत्नमा जान्छु कि भनेर हेर्न उसको टोकरीमा हाल्दै कोशिश गरें। यस्तो देखिन्थ्यो कि यसले मात्र काम गर्न सक्छ। म फेरि ओछ्यानमा गए। :0:०२ मा उसले ओछ्याउन थाले जस्तो मैले सुताएको थिएँ। म फेरि उनको टोकरीमा गएँ र उसलाई चबाउन उसको लागि एउटा हड्डी समातें र उहाँसँग शान्तसँग कुरा गरें। उसको आँखा झुकाउन थाले जब उसले आधा आफ्नो क्रेट भित्र अझै हड्डी चबायो। उसको आँखा एक वा दुई मिनेट सम्म बन्द नभएसम्म म त्यहाँ केही बेर कुर्दै रहेँ, त्यसपछि म एक घण्टाको लागि ओछ्यानमा फिर्ता गएँ।
ब्रुनो अब weeks हप्ता र days दिन पुरानो भयो। ऊ घर भत्काएर राम्रो गरिरहेको देखिन्थ्यो। ऊ या त भित्रबाट हेरिरहेको थियो, उसको टोकरीमा वा बाहिर। चाँडै ऊ उठ्यो हामीले त्यसलाई बाहिर पेशाबमा राख्यौं। ऊ सुत्न नभएसम्म ऊ क्रेटमा छैन। ब्रुनो निदाइरहेकी थिए त्यसैले मैले उसलाई झोलाको लागि उसको टोकरीमा हाल्ने निर्णय गरें। म उनको झोलामा राख्न को लागी झुकाव रूपमा म केहि गन्ध। मैले उसको कम्बलहरू महसुस गरें र निश्चित थिए कि तिनीहरू नम थिए। ब्रुनो आफ्नो क्रेट मा peee र यसमा सुतिरहेको थियो! मैले उसको ओछ्यान परिवर्तन गरें र ऊ असाध्यै खुसी भए। अब मैले उसलाई रोक्न कसरी पत्ता लगाउनु पर्छ जब उसले मेरो अघि यो गरिरहेको छैन। क्रेट अति ठूलो छैन, जो क्रेट साइज जाँच गर्नका लागि कसैलाई मेरो पहिलो सल्लाह हुने थियो। हम्म। ऊ7हप्ता मात्र छ। सायद म उनलाई मध्य रातमा उठेको सुन्न सक्तिनँ। यस उमेरमा, कुकुरहरू उनीहरूलाई जानु अघि शारीरिक रूपमा यसलाई यत्ति लामो समयसम्म समात्न सक्छन्, जे भए पनि। बेबी मोनिटर ??? हुनसक्छ??
ब्रुनो आफ्नो क्रेटमा सुते देखि पेशा जस्तो गन्ध आउँछ। नुहाउने समय।
ब्रुनोको छैठौं रात: weeks हप्ता र days दिन पुरानो
ब्रुनो बिहान २:१:15 बजे माथि थियो। मैले उसलाई पेशाब गर्न दिएँ। ऊ फेरि केही बेर निद्रामा पर्यो र बिहान :30: re० तिर फेरि जगायो।
ब्रुनो फेरी पछाडि कुनामा, फेरि आफ्नो टोकरीमा pee। मैले उसको ओछ्यान फेरि धुवाँमा फालिदिनुपर्‍यो र यसलाई नयाँ बेडिंगको साथ बदल्नुपर्‍यो उसको टोकरा एकदम ठूलो छैन। मलाई विश्वास छ कि मैले सुत्ने बेलाभन्दा पहिले उनी कति पिउँछन् भनेर मैले हेर्नु पर्छ। यस उमेरमा कुकुरहरू सँग सानो ब्लेडरहरू हुन्छन् र शारीरिक रूपमा यसलाई लामो समयसम्म समात्न सक्दैनन्।
6::45aबिहान ब्रुनो घर भित्र फर्केर आउन भन्यो र मेरो काखमा कर्ल गर्न चाहान्थ्यो, जसको मतलब ऊ फेरि सुत्न तयार छ। मैले उसलाई भर्खरै ओछ्यानमा राखें।
एली र ब्रुनो कुकुरको ओछ्यानमा साझेदारी गर्दै। हो, म विश्वास गर्दछु तिनीहरू एक अर्कालाई मन पराउँछन्।
किन ब्रुनो ... किन ?! ब्रुनो आफ्नो कुकुरको ओछ्यानमा पल्ट्यो, त्यो ओछ्यान हामी उसको लागि पोर्चमा राख्छौं। मैले उसको ओछ्यानमा कम्मर हालेर सुकाउनु पर्छ। यो उनको आमालाई सोधिरहेकी छ किन उनी आफ्नो ओछ्यानमा नलीको साथ सम्पूर्ण भिजेको छ। वास्तवमा, यो उसले ओछ्यानबाट नमी ल्याउँदैछ केही नयाँ र चाखलाग्दो गन्धहरू पत्ता लगाउँदैछ!
एक पिल्ला हुर्काउँदै: ब्रुनो बक्सर
एक पिल्ला हुर्काउँदै: स्पान्सर पिट बुल
एक पिल्ला हुर्काउने: मिया अमेरिकी बुली (बुली पिट)
एक पिल्ला हुर्काउने: मिया, स्पेंसर र ब्रुनोको पालनपोषण
यो जीवनको मार्ग हो
किन कुकुर फलोअर हुनुपर्दछ
प्रभुत्ववान हुनु भनेको के हो?
कुकुरहरूलाई मात्र प्रेम चाहिन्छ
बिभिन्न कुकुर स्वभाव
कुकुर शरीर भाषा
तपाईंको प्याक बीच झगडा रोकिदै
कुकुर प्रशिक्षण बनाम कुकुर व्यवहार
दण्ड बनाम कुकुरहरुमा सुधार
के तपाईं असफलताको लागि आफ्नो कुकुर सेट अप गर्दै हुनुहुन्छ?
प्राकृतिक कुकुर व्यवहार ज्ञान को अभाव
डरलाग्दो कुकुरसँग काम गर्दै
पुरानो कुकुर, नयाँ ट्रिक्स
कुकुरको इन्द्रिय बुझ्ने
मेरो कुकुर दुरुपयोग थियो
सफलतापूर्वक एक उद्धार कुकुरलाई ग्रहण गर्दै
सकारात्मक सुदृढीकरण: के यो पर्याप्त छ?
वयस्क कुकुर र नयाँ पिल्ला
किन मेरो कुकुरले त्यसो गर्यो?
कुकुर हिंड्नको लागि उचित तरिका
द वॉक: अन्य कुकुरहरू पार गर्दै
कुकुरहरू प्रस्तुत गर्दै
कुकुरहरु र मानव भावनाहरु
के कुकुरहरूले भेदभाव गर्छन्?
कुकुरहरू: आँधीबेहरी र आतिशबाजीको डर
रोजगार प्रदान गर्दा मुद्दाहरूको साथ कुकुरलाई मद्दत गर्दछ
बच्चाहरूलाई सम्मान गर्न कुकुरहरूलाई सिकाउँदै
कुकुर संचार गर्न उचित मानव
असभ्य कुकुर मालिकहरू
क्यानाइन फिडिinc् इन्सिन्ट्स
मानव कुकुर No-No को: तपाईंको कुकुर
मानव कुकुर No-No को: अन्य कुकुरहरू
कुकुरहरु बारे FAQ
कुकुरहरुमा अलग चिंता
कुकुरहरूमा प्रबल व्यवहार
घरमा नयाँ मानव बच्चा ल्याउँदै
अल्फा स्थिति स्थापना र राख्दै
कुकुरहरूका लागि अल्फा बुट क्याम्प
जम्पिंग कुकुरलाई रोक्दै
जम्पि Dog कुकुरहरूमा मानव मनोविज्ञान प्रयोग गर्दै
कुकुरहरूले पीछा गर्दै कारहरू
प्रशिक्षण कलरहरू। ती प्रयोग गर्नु पर्छ?
तपाईंको कुकुर Spaying र Neutering
एक अल्फा कुकुर
को झगडा, पुरुष वा महिला कुकुर को बढी प्रवण छ?
Whelping: पिल्ला निप्पल गार्डि।
पिट बुल टेरियर पछि सत्य
कुकुरको आक्रमणबाट तपाइँको कुकुरलाई जोगाउँदै
चेइ Dog्ग कुकुरहरू
एसपीसीए उच्च-हत्या शेल्टर
एक Senseless मृत्यु, एक गलतफहमी कुकुर
सानो नेतृत्वले के गर्न सक्दछ आश्चर्यजनक
एक उद्धार कुकुरलाई रूपान्तरण गर्दै
डीएनए क्यानाइन नस्ल पहिचान
एक पिल्ला हुर्काउँदै
एक अल्फा पिल्ला हुर्काउँदै
सडक पिल्लाको बीचमा उठाउँदै
लाइन पपीको पछाडि हुर्काउँदै
पिल्ला विकासको चरणहरू
कुकुर वा कुकुरलाई नयाँ क्रेट प्रस्तुत गर्दै
पिल्ला स्वभाव टेस्ट
कुकुर फाईट - तपाईंको प्याक बुझ्दै
तपाइँको कुकुर वा कुकुरलाई बुझ्दै
तपाईको कुकुरलाई सामाजिक बनाउँदै
मैले दोस्रो कुकुर पाउनु पर्छ
के तपाईंको कुकुर नियन्त्रण बाहिर छ?
भ्रम कुकुर प्रशिक्षण कलर
शीर्ष कुकुर फोटोहरू
तपाइँको कुकुर वा कुकुरलाई प्रशिक्षण दिदै
के तपाई कुकुरका लागि तयार हुनुहुन्छ?
प्रजनक बनाम उद्धार
उत्तम कुकुर फेला पार्नुहोस्
ऐन मा पक्राउ
कुकुरहरूको प्याक यहाँ छ!
सिफारिश कुकुर पुस्तक र डीभिडी
ज्याक रसल dachshund मिश्रण स्वभाव
फ्रेन्च बुलडग शार पेई मिक्स
२० र p० पाउन्डको बीचमा कुकुरहरू
निलो र टैन लघु dachshund
बीगल र orange्ग सुन्तला र सेतो
बुलडग विइनर कुकुरसँग मिसियो